Igcagcele esokeni ngoMkhambathini Half Marathon 2021 – Sivubela intuthuko Newspaper
Esithombeni: uMnu Eric Ngcongo iMeya yaseMkhambathini
UBUHOLI bukaMasipala waseMkhambathini phakathi kwaseHammersdale naseMgungundlovu buthi intendele iwele enkundleni njengoba ngeSonto mhlaka 3 October izosingatha umjaho ka-21KM owaziwa ngoMkhambathini Half Marathon okuhlelwe ngawo ukuqinisa ezemidlalo kwintsha yakule ndawo.
AboMkhambathini Athletic Club bathi ngalo mjaho bahlose ukuvundulula amakhono afihlakele kwintsha yendawo ngenhloso yokuqhakazisa ikusasa layo kwezokusubatha.
UMnuz Eric Ngcongo oyiMeya kulo masipala esithangamini sabezindaba ebesimayelana nalo mjaho uMkhambathini Half Marathon uthe uhambela phezulu kulezi nsuku emuva kokufika esivumelwananeni naboMkhambathini Athletic Club ukusingatha lo mjaho okulindeleke ukuba ungenelwe ngabantu abevile ku-1500 naphezu kokuba uzobe igijinywa ngokweminxa emithathu. Owokuqala kuzoba ngoka 21KM owesibili kube u-10KM bese kuba no5KM. Yonke le minxa izongenelwa ngabantu abawu-500 abazowugijima ngezikhathi ezingafani ukugcina imithetho yeCOVID-19 enqanda ukuminyana kwabantu ndawonye. “Sinqume ukuthi lo mjaho wenziwe minyaka yonke kusukela kulona ka-2021. Kube yizindaba ezimnandi zokuzwa aboMkhambathini Athletic Club uma besitshela ukusebenzisana nathi kulo mjaho. Baye basho kubantu vele abanempokophelo enhle emphakathini abawuholayo. Sihlala minyaka yonke sinazo izinhlelo zezemidlalo kusuke ezintweni zesintu, ingoma kodwa besingakaze sibe nomdlalo walolu hlobo. Yingakho siwuthathele phezulu naphezu kokuba besingenaso isabelo sawo kodwa siye sabheka enqolobaneni siwumasipala ukuthi kakukho yini esingahlangabeza ngakho. Sibe nenhlanhla ngobak ukhona abaxhasi abagcine bezinikela ngokwelula isandla bahlangabezane nesizokudinga ngosuku lomjaho,” usho kanje.
UMnu Msizi Zimu woMkhambathini Athletic Club uthe inhloso yabo ngalo mjaho wukusondeza intsha kwezemidlalo nokuyikhipha ezintweni ezingalungile ezifaka phakathi ubugebengu obunhlobonhlobo kuze kufike nasekusetshenzisweni kwezidakamizwa ezingalungile ezingagcina zilimaze ikusasa layo kungcole namagama ayo ivimbeleke ekuzithuthukiseni
Imenenja kaMasipala waseMkhambathini uMnu Sanele Mngwengwe iqinise umphakathi idolo iwunika ithemba ithi zonke ezokuvikeleka kwiCOVID-19 ziqinisiwe. Ithe abantu abazobe bengazifakile izifonyo ngabazobe begijima kodwa bazofika nezabo kuthi uma sebegijima bazikhumule uma beqeda ukugijima banikezwe ezinye.